Macluumaad la xiriira dil wadareedka ka dhacay Gobolka Mudug | Dhacdo
Macluumaad la xiriira dil wadareedka ka dhacay Gobolka Mudug
Faah faahino ayaa laga helaya dilka saddexda qof ee isku qoyska ahaa loogu gaystay deegaanka Saax-qurun ee Gobolka Mudug. Dilkan ayaa waxaa gaystay kooxo hubeysan oo aan heybtooda la aqoonsan.
Saddexda qof ee la dilay ayaa ku sugnaa hoygooda, xilligii lagu soo weerarayay, waxaana dilkooda loo maleynaya mid la xiriira aanooyinka xagga beelaha.
Waxaa sidoo kale weerarka ku dhaawacmay sida ay ehelada sheegeen gabar, illaa iyo imika koomo ku jirta.
Liibaan Cabdullahi Warsame oo ay ehel yihiin dadkaasi la dilay oo BBC u waramay isaga oo ku sugan isbitaal ku yaalla magaalada Gaalkacyo oo ah halka lagu dabiibayo haweeney u dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi, ayaa sheegay in dhacdadani ay ahayd mid aad uga argagaxeen.
Liibaan Cabdullaahi ayaa intaa ku daray in qoyskooda oo horey qayb ka mid ah ay agoon ahaayeen ay imikana geeridan naxdinta leh ku timid.
“Dad wada dhashay oo haddana qayb ka mid ah ay agoon hore ahaayeen, adeerkii korinayay agoontana uu dhintay ayaan nahay, wax aan qiyaasi karno ma aha dareenkeena.” Ayuu yiri Liibaan Cabdullaahi.
Libaan ayaa intaa ku daray in dhacdadani ay dhacday xalay markii ay saacaddu ahayd 12 saqda dhexe.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dadka falka dilka ah gaystay ay laba qaybood ahaayeen islamarkana dadka la laayay siyaabo kala duwan loo dilay.
“Dadka sida noola sheegay laba qaybood ayay ahaayeen adeerka wayn rag aan tiradooda la aqoon ayaa dilay dadka caruurta nimanka dilay-na oo reerka xabadeeyay sida hooyada reerka noogu sheegtay in saddex ilaa afar meelahaasi ahaayeen.” Ayuu yiri Liibaan.
Waxa kaloo uu yiri “Ninka adeerka ah ee la dilay guriga laguma dilin geel cidda u fadhiyay maadaama dadku ay xoolo dhaqato yihiin ayuu dhex jiifay geela ayaa lagu dhex dilay,”ayuu yiri Mr liibaan.
Dhanka kale Wasiirka Warfaafinta Galmudug oo la hadlay BBC ayaa sheegay in lagu dabo jooggo kooxihii falkaasi ka dambeeyay.
“Maamulka waa ka hawlgalay, maleeshiyaadkii falkaasi gaystay-na waa lagu raadjooggaa, tuhunkana meel buu saaran yahay, waxa ayna isugu soo uruurtay beelo halkaasi degga, oo aano qabiil in dadkaasi loo dilay ayaa la qiyaasayaa.” Ayuu yiri Falagle.
Dilalka aanooyinka qabaa’ilada ayaa ku soo noqnoqday Gobolada Dhexe.